Nhau - Ruiyi vhiri inosungirwa kurwira nedenda mamiriro
Muna 2020, inoverengeka coronavirus pneumonia kuputika kwakapfuura nenyika. Mukurwisa denda, Ruiyi tai, sechiratidzo chinotungamira muindasitiri, anga achishingairira kuita basa rayo rezvemagariro. Kubudikidza nezviito zvakadai sekushandisazve kugadzirwa, kubatsira vanobatsirana nezvitoro kuti vadzokere kubasa zvakachengeteka, uye kuita online online denda rekudzivirira, Ruiyi tai yakaratidza kutsunga kwayo kukurira matambudziko uye kuvimba mukukunda denda mamiriro nevanhu vese nyika.
Kunyatsodzivirirwa kwevashandi vefekitori kuti vadzokere kubasa
Munguva yakakosha nguva, iko kutsetseka kutangazve kwekugadzira ibwe reBallast rekudzikamisa iro rezvemagariro pamwe nehupfumi. Ruiyi vhiri rakatora danho rekutora iro rezvemagariro. Pasi pekufungidzira kwekuita basa rakanaka mukudzivirira uye kudzora denda, Ruiyi vhiri rakaita chinzvimbo chinotungamira muindasitiri uye rakatangazve basa nekugadzira. Novel coronavirus pneumonia yakagadzwa panguva yekutanga, ichitungamira boka kuti riumbe chirongwa chitsva chemaawa makumi maviri nemana ekudzivirira korona nyumoniya, uye vatore matanho chaiwo sekuyera tembiricha uye kuenda, manejimendi yekudyira muimba yekudyira, kutapukisa nzvimbo dzeveruzhinji nedzimba dzekuvata, nezvimwewo, kuitira kupa vashandi nzvimbo yekushanda yakachengeteka uye kuita mhinduro mbiri dzakakodzera kudenda iri.
Kutora vatengi senzvimbo yepakati, sevhisi sevhisi yakachengeteka zvakanyanya
Ruiyi zvitoro zvematai zvakapindura zvakanaka uye zvakanyatso shandisa matanho ekudzivirira echirwere, uye basa rekudzivirira denda rakasangana nematanho ehurumende yemuno. Kuwedzera kune yakakosha denda rekudzivirira basa senge kudziya kwekushisa uye nzvimbo yebasa disinfection, zvitoro zvine mamiriro zvakare zvinoita kusimudzira sevhisi, ichipa mumota disinfection sevhisi uye denda rekudzivirira zvinhu kune vatengi vanosvika kuchitoro, vachipa pasuo nesuo sevhisi. uye kusimudza-kuenda-kuruoko kutora uye kuendesa masevhisi kune vatengi vasinganetsi kuchitoro.
Kuenderera mberi kwekutapurirana kweanodzivirira matanho kubatsira denda rekudzivirira
Mukutarisana nemamiriro ezvinhu echirwere, Ruiyi anonamatira kune mweya wechiratidzo we "kuenda kumberi uye kusambomira", achishingairira kuita basa revanhu, kugovana chikepe chimwe chete nevanhu venyika yese, uye anoshingairira kurwisa denda iri . Ruiyi vhiri richaramba richiteerera zvakanyanya kufambira mberi kwebasa rekudzivirira uye rekudzora, richienderera mberi nekupa basa rekurwisa denda, uye nekutenda zvakasimba kuti denda richakundwa pakupedzisira!
Concrete chisanganiso Rori, China PU Furo vhiri, China PU Wheel, Caster Wheel, PU Wheel, China Kongiri Musanganiswa,